Induction Brazing Stainless Steel Tools ine Induction Heater
musha / Applications / Induction Brazing / Induction Brazing Stainless Simbi Zvishandiso
Category: Induction Brazing Tags: kusungira simbi tsvina, kupenya simbi isina chimbi, high frequency brazing, kuburitsa kusungira sinai, RF kusungira simbi isina chinhu, Simba risina chinhu, simbi isina simbi inopisa kupisa
Induction Brazing Stainless Steel Tools NeRF Heating Equipments
Kuti kusungirire majoka matatu pane rimwe remagetsi reprophy jet nechinopisa kupisa; kunatsiridza zvibereko kusagadzikana uye kuderedza kupera nguva.
Stainless steel prophy nose pande, maviri tubes, tube support collar, braze zvindori zvindori, B1 flux
DW-UHF-4.5kW RF Induction Heating Power Supply, yakagadzirwa-inductor (coil)
Kuongororwa kwekutanga kwakagadzirwa kuisa nguva-kusvika-inopisa uye kupisa zvinyorwa. Yakanga yakarongerwa kuti nzira mbiri dzepakati yaizopa migumisiro yakaisvonaka. Nokuda kwekushandiswa kweiyo yakagadzirirwa zvakananga zvina-kutenderera, kaviri-wound helical inductor yakashandiswa kupinza kunyange kupisa kumativi akabatanidzwa. Iyo miviri miviri, tube support collar uye nhengo yemhino yakanga yakasangana uye yakagadziriswa pachigaro nechinguva chiduku. Mhete dzekasa dzesimbi dzaiswa panzvimbo uye ine jasi tsvuku yeB1 flux yakashandiswa kuungano yose. Muchikamu chekutanga chekutsvaira, iyo yepamusoro pombi yekuguma kwegungano yakaiswa munzvimbo yekudziya uye simba rekudzikinura raipiwa kwemashure 10. Muchikamu chechipiri, gungano rakadzoswa uye kuguma kwegungano kwakapisa kune mamwe maawa 10. Iko kereke yakabva yasunungurwa, yakashambidzwa mumvura inopisa kuti ibvise kubuda, uye inoputika nemhepo inopisa.
Mitsara inogadziriswa, yakadzokororwa yakawanikwa pamwe neDW-UHF-4.5kW magetsi uye 10 yechipiri kupisa. Chero imwe sangano yakashongedzwa yakaiswa chisimbiso neavo